Veliranon’Iarivo – Kandidà Andriantsitohaina Naina: « Hampiroboroboana ny fitantanana tsara rindra sy mangarahara » | NewsMada
Veliranon’Iarivo – Kandidà Andriantsitohaina Naina: « Hampiroboroboana ny fitantanana tsara rindra sy mangarahara »
Par Taratra sur 07/11/2019
« Efa mahahenika ny andavanandron’ny mponina ny kolikoly , amin’ny sehatra rehetra na aiza na aiza ary na oviana na oviana. Matetika, iharan’izany ireo marefo. Anisan’ny fototry ny fitantanana ny tanàna ny ady amin’ny kolikoly. Tsy maintsy ho hentitra izany ary tsy mitanila : tsy hisy fandeferana”, hoy ny kandidàn’ny IRK, Andriantsitohaina Naina, ao anatin’ilay “Veliranon’Iarivo”. Nambarany fa mila ny fiaraha-mientana izany hiarovana ny olom-pirenena amin’ny fikarakarana taratasim-panjakana rehetra, hamerenana ny fitokisana eo amin’ny olom-boafidy sy ny vahoaka. “Hatao mangarahara tanteraka ary voaara-maso ny kaontin’ny kaominina”, hoy ihany izy.
Tafiditra ao anatin’izany koa anefa ny fiaraha-miasa amin’ny Bianco hametrahana ivontoeram-pifandraisana “zotra maitso” iadiana amin’ny kolikoly, handraisana ny fitarainan’ny vahoaka iharan’ny tsy ara-dalàna na vavolombelon’ny kolikoly.
Ireo teboka valo amin’ny “Veliranon’Iarivo”: Ny fanatsarana sy ny fanohanana ny mahasoa ny mponina. Ny ady amin’ny kolikoly sy ny fitantanana mangarahara eo anivon’ny kaominina. Ny fijerena ireo tsenakely, fototry ny fandrosoan’ny toekaren’ny tanàna, ny fandraharahana antoky ny fampandrosoana.
Ny fametrahana Antananarivo, tanàna maitso. Antananarivo, Renivohitry ny kolontsaina sy ny tantara ary ny fampiroboroboana ny toeram-ponenana mendrika sy fanomezan-danja ireo tanàna miorina.